Ihempe yePolo, iiHoodies kunye neJacket, iZemidlalo - uLebang
IiHoodies kunye neJacket
I-Nanchang Lebang Garment Co, Ltd. ekwiNanchang Jiangxi, China, ingumenzi wezinxibo ezinithiweyo, egxile kuyilo, ukuthengisa kunye nokuthengisa kweentsana / iimpahla zaBantu abadala, kubandakanya nezemidlalo, ibhatyi kunye nengubo, ihempe kunye nejezi, ivesti & iitopu, isikipa kunye nehempe yePolo njl.
Gxila kwintengiso ekumgangatho ophezulu
UMyili wamadoda, iiHoodies eziPrintiweyo kunye neeYilo
Ihowuliseyili amadoda fashion pullover hoodies amadoda siko l ...
I-Nanchang Lebang Garment Co, Ltd., ebekwe e-Nanchang Jiangxi, e-China, ingumenzi wezinxibo ezinithiweyo, egxila kuyilo, ukuthengisa kunye nokuthengisa kweentsana / iimpahla zaBantu abadala, kubandakanya nezemidlalo, ibhatyi kunye nengubo, ihempe kunye ne sweatshi, ivesti kunye neetopu, isikipa kunye nehempe yePolo njl. Ngobungakanani bomgangatho weemitha zesikwere ezingama-8000 kunye nabasebenzi abangama-280 kwimizi-mveliso yayo, uNanchang Lebang Garment Co, Ltd isebenzisa yonke inkqubo yolawulo lomgangatho kwaye ivelisa imveliso yengubo esemgangathweni malunga neziqwenga ezingama-300,000 nganye Intengiso yethu ephambili iseMelika, iYurophu, uMzantsi Melika, imakethi yaseMzantsi Afrika. Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava kunye nophuhliso, sifumene amanqaku kwi-greatNanchang Lebang Garment Co, Ltd., ebekwe e-Nanchang Jiangxi, e-China, ingumenzi wezinto ezinithiweyo, ogxile kuyilo, ukuvelisa kunye nokuthengisa kweentsana / iimpahla zaBantu naBadala, kubandakanya ezemidlalo, ibhatyi & idyasi, iheodi & isweatshirt, ivesti kunye neetop, isikipa kunye nehempe yePolo njl. Ngobungakanani bomgangatho weemitha zesikwere ezingama-8000 kunye nabasebenzi abangama-280 kwimizi-mveliso yayo, iNanchang Lebang Garment Co, Ltd iphumeza ulawulo lomgangatho wonke Inkqubo kwaye ivelisa iimveliso zeengubo ezisemgangathweni malunga namaqhekeza angama-300,000 ngenyanga.Imarike yethu ephambili iseMelika, eYurophu, eMzantsi Melika, kwimarike yaseMzantsi Afrika. Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava kunye nophuhliso, sifumene impumelelo enkulu, kwaye ngeli xesha sinedumela elihle kubaxumi bethu kwihlabathi liphela. impumelelo, i-Nanchang Lebang Garment Co, Ltd., ebekwe e-Nanchang Jiangxi, e-China, ingumenzi wezinxibo ezinithiweyo, egxila kuyilo, ukuthengisa kunye nokuthengisa kweentsana / iimpahla zaBantu abadala, kubandakanya nezemidlalo, ibhatyi kunye nengubo, ihempe kunye ne sweatshi , ivesti kunye neetopu, isikipa kunye nehempe yePolo njl. Ngobungakanani bomgangatho weemitha zesikwere ezingama-8000 kunye nabasebenzi abangama-280 kwimizi-mveliso yayo, iNanchang Lebang Garment Co., Ltd iphumeza inkqubo yolawulo lomgangatho wonke kwaye ivelisa imveliso yengubo esemgangathweni emalunga nama-300,000. iziqwenga ngenyanga.Imakethi yethu ephambili iseMelika, iYurophu, uMzantsi Melika, imakethi yaseMzantsi Afrika. Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava kunye nophuhliso, sifumene impumelelo enkulu, kwaye ngeli xesha sinedumela elihle kubaxumi bethu kwihlabathi liphela. Ngelo xesha siye igama elihle kubathengi bethu lonke ihlabathi.
I-T-shirt, okanye ihempe, luhlobo lwehempe yelaphu ebizwa ngohlobo lwe-T lomzimba wayo kunye nemikhono yayo. Ngokwesiko, inemikhono emifutshane kunye nentsimbi ejikelezayo, eyaziwa njenge-crew neck, engenakho ikhola. Izikipa ngokubanzi zenziwe ngelaphu eloluliweyo, elilula nelingabizi mali kwaye kulula ukuzicoca.
Ekupheleni kwenkulungwane ye-19, imisebenzi yangaphandle yabaluleka kwiklasi yolawulo lwaseBritane. I-Jodhpur ibhulukhwe kunye neehempe ze-polo zaba yinxalenye ye-wardrobe yezemidlalo enxulumene nehashe. Ihempe zepolo zoqobo ...